Sarkaal Da’ahaa oo xalay lagu dilay Baraawe? – Warfaafiye:
Sarkaal Da’ahaa oo xalay lagu dilay Baraawe?
Laba dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa xalay fiidkii waxa ay xaafad ka tirsan degmada Baraawe ku dileen Nin Da’ahaa, kaasi oo lagu magacaabi jiray Sayidnaa Xaajow Muukow oo caan ka ahaa Magaalada gaar ahaan xaafadii uu deganaa ee Saqaawu-diin.
Kooxda dilka geysatay ayaa waxa ay Marxuum Sayidnaa u dileen si farsameysan, kadib markii ay isaga dhigeen dhalinyaro kubad cayaareysa, kadibna markii Masjidka uu ka soo baxay oo inyar uu soo socday ay Rasaas hubiyeen.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha hoose oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ninka la dilay in horey uu u ahaa Janan ka tirsanaa Dowladdii Dhexe, hadana uu ahaa howlgab, oo 91-dii ay ugu dambeysay siyaasad.